मार्गानुगामी दैनिक पाँचौ वर्षमा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Editorial मार्गानुगामी दैनिक पाँचौ वर्षमा
मार्गानुगामी दैनिक पाँचौ वर्षमा
मार्गानुगामी दैनिक आजदेखि पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा ब्रह्मले देखेका कुरा हामीले निर्भिकता र जिम्मेवारीसाथ पाठकमाझ राख्यौं, आउने दिनहरूमा पनि त्यो जारी रहनेछ ।
चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी फेरि दोहर्याउन चाहन्छौं लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, राष्ट्रियताको पक्षपोषण, सुशासन र पारदर्शिता, सामाजिक परिवर्तन, नागरिक हकअधिकार र स्वाभिमानप्रति हामी सधैं चनाखो रहनेछौ । हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण नेपाली समाजलाई अघि बढाउने बाटो नै समावेशी लोकतन्त्रको मध्यमार्ग हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौ ।
यही वर्षदेखि मुलुकको राजनीति पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकले लामो संक्रमणकाल पूरा गरेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको कार्यभार पूरा भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो काम सुरू गरेका छन् ।
अबको चुनौती कानून र विधिको पालनामार्फत् मुलुकमा सुशासनको स्थापना हो । सुशासन विकासको पूर्वशर्त हो । सुशासनमा टेकेर मात्र विकास र सम्वृद्धिका एजेन्डा अघि बढाउन सकिन्छ । हामीलाई कस्तो विकास चाहिएको हो ? विकासका सही नीति, रणनीति के हुन् ? आगामी दिनमा यी विषयहरूमा व्यापक बहस हुनेछन् । त्यसमा पनि २ नम्वर प्रदेश भू–बनोटको हिसावले सुगम भएपनि हरेक दृष्टिले पछाडी पारिएको छ । यसको विकासका मुख्य बाधक नै सुशासनको कमिले हो ।
हामी चनाखो भएर यी मुद्दाहरू पछ्याउने छौं, नेपाली समाजका हरेका सरोकारहरू पछ्याउनेछौ । हामीलाई विश्वास छ । पाठकहरुले हामीलाई पछ्यारहनु हुनेछ ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता, दिगो र स्वतन्त्र पत्रकारिताकको लागि आधारभूत शर्त हो यसको निरन्तर पाठकसम्म पुग्ने कार्य । त्यसको लागि हामीले धेरैअघिदेखि योजना बनाई रहको छौ यो कुराहामी पाठकहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
मार्गानुगामी दैनिकलाई नेपालीहरूबीच संवाद गर्ने भरपर्दो मञ्च बनाउने अभियानमा हामी सदैव गम्भीरतापूर्वक लागिरहनेछौं । पाठकहरूबाट सधैं प्राप्त विश्वास र भरोसा हाम्रो पुँजी हो । यसले जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न हामीलाई सधैं प्रोत्साहित गरेको छ । पाठकहरूका प्रतिक्रिया र सुझाव हाम्रा मार्गदर्शन हुन् । हामी थप पाठक सहभागिताको निमन्त्रणा गर्दै आगामी वर्ष झन् खरो रूपमा प्रस्तुत हुने अठोट गर्दछौं ।